China abakhiqizi bemishini yefilimu ye-PE / PP nabaphakeli | Imishini Yokuceba
Umgqomo womshini wokucindezela u-1 akudingeki ukwelashwa nge-38Crmoal, ngoba ingxenye ye-fricton isekhanda.
2.Ukucindezela umgqomo womklamo, ebusweni, umgqomo uzobhola izimbobo ezincane kakhulu. Imbobo yangaphakathi cishe ngo-3mm, ngaphandle cishe ngo-6mm.
3.Ngaphakathi komshini wokucindezela umshini unama-5 ama-Keyway, (isithombe singu-300 uhlobo, yiba nama-6 pcs Keyway),
I-4.Imishini yokukhama yesikulufu kufanele ibe yi-38Crmoal, rigidy high, Good nemihuzuko ukumelana.
6.Izimbobo zesikhunta zomshini wokucindezela zingaguquguquka